Tonido: gadzira rako pachako uye multimedia server panguva imwe chete | Linux Vakapindwa muropa
Tonido: gadzira rako wega uye reva media panguva imwe chete
Nhasi kuva neruzivo rwedu rwakachengetwa mugore hakuchisiri chinhu chepamusoro Kana isina kuve chinhu chakakosha uye zvakanyanya zuva nezuva, saka nacho isu tatozvidzivirira kuve nekuunza mafaera edu panyama midhiya, iyo yatinoita nayo kuti hupenyu huve nyore uye tinokwanisa kuwana kwavari nguva dzese.
Pachiitiko ichi Ini ndichatora iwo mukana kukuudza zvishoma nezvaTonido, Ndakawana iyi software yemahara ndichitsvaga mambure ndichitsvaga kugona kugadzira dura remultimedia iro raizoshanda nekutora komputa yangu uye nekugona kuwana zvirimo kubva kune yangu smartphone, network uye pamusoro pazvose kukwanisa kumhanyisa yangu zvemukati pane yangu Chromecast.
Zvakanaka, Tonido isoftware iyo inotipa isu simba rekugadzira yedu pachedu gore (faira yekubata sevhisi) tichishandisa komputa yedu, Ichi chishandiso chine nzira mbiri lndeipi yemahara yekuisa wega uye imwe yemakambani inobhadharwa sezvo ichipa zvimwe zvekuwedzera maficha.
Iyo vhezheni vhezheni inopa mumwe mushandisi kuwana kune avo vese mafaera pakombuta kuburikidza newebhu browser, smartphone, piritsi, kana kunyangwe DLNA-inogoneswa michina
FileCloud ibhizimusi / renyanzvi edition yeTonido iyo inobvumidza kambani kugadzira yavo yakavanzika gore chengetedzo uye sync mhinduro
Sezvandambotaura zvekuisirwa wega, Tonido mahara uye pamusoro pezvose multiplatform, saka tinogona kugadzira server yedu kubva paWindows, Linux kana Mac.
Kupfeka Tonido inotipa zvinotevera zvinotevera:
Kuwana kune chero mhando refaira kubva chero kupi
Goverana mafaera mahombe uye maforodha; Iko hakuna faira saizi miganho
Gadzira ruzhinji rwevanhu zvinongedzo, zvakachengetedzeka zvakavanzika kana gadzira muenzi / faira kugovera maakaundi
Otomatiki negadziriro yeparutivi mapikicha uye mavhidhiyo kubva iOS uye Android zvishandiso
Kune rimwe divi, kusiyana nemamwe masevhisi ekugadzira gore, Tonido anotibvumidza kuti tigadzire zita rekushandisa nephasiwedi iyo iyo inotipa iyo kero ye url uye nayo tinogona kuwana ruzivo rwedu chero nguva kubva chero kupi.
Nezve izvi tinokanganwa kuganhurirwa pakuve pane imwechete network yeWi-Fi Tonido inotsigira akawanda mafomati emafaira pakati pawo ari: mkv, avi, mp4, vob, xvid, wmv, flac, ogg, wma, mp3, jpeg, png, gif, Mahofisi nemaWorks mafomati, pdf uye zvimwe zvakawanda.
1 Maitiro ekuisa Tonido paLinux?
2 Maitiro ekugadzirisa Tonido paLinux?
Maitiro ekuisa Tonido paLinux?
Isu tinongofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye kurodha pasi kunyorera kubva kune yayo yekurodha chikamu, kunyanya isu tinofarira server, iyo chinongedzo ndeichi.
Waita kurodha pasi ngatienderei mberi kuburitsa faira zveizvi isu tinovhura terminal uye tinoita inotevera mirairo:
Ongorora: kana iwe ukashandisa makumi matanhatu neshanu dhizaini zita refaira uye dhairekodhi iri "tonido64" isina makotesheni.
Kutanga tichaenda kuzunura iyo faira:
Iye zvino Kana iwe uchida kuti Tonido amhanye paunotanga system yako, isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Iye zvino tichafambisa faira rinoguma:
Chekupedzisira, isu tinopfuurira kuwedzera iyo Tonido kuvhura kune inotevera faira
Iko kumagumo kwefaira isu tuchawedzera unotevera mutsara:
Uye pakupedzisira isu tinotanga chishandiso nemirairo inoteveraZvakare, kana iwe usiri kufarira kuwedzera kune yako kutanga, iwe unongofanirwa kuisa dhairekitori nekuita uyu murairo:
Maitiro ekugadzirisa Tonido paLinux?
Sezvo komputa yatino dhawunirodha Tonido ndiyo ichave inoshanda sevha, isu tinofanirwa kugadzira kumisikidza.
Sezvo Launcher yaimhanyiswa, bhurawuza redu rinovhura uko nIchakukumbira iwe kunyoresa pamberi kuti uwane mushandisi muTonido.
Waita kunyoreswa Tinofanira kungotevera matanho aanoratidza uye tiri kufambira mberi. Tinofanira kusarudza maforodha atinoda kuwiriraniswa naTonido.
Iye zvino zvinokurudzirwa zvakare kuti ushandise iyi sarudzo kuitira kuti Tonido atange kuona ese mafaera mukati memafolda uye aite seari kuwanikwa kwatiri mukati megore redu.
Chekupedzisira, isu tinongofanirwa kurodha pasi mutengi, patinowana sarudzo yekushandisa yedu smartphone kana kuiisawo pane imwe komputa, kubva kwatinogona kuona mafaera nemaforodha atinowirirana kuti tigadzire redu gore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Tonido: gadzira rako wega uye reva media panguva imwe chete
Gore ... midziyo yangu mumba memumwe munhu.
Jimmy Velarde akadaro
Chinhu chega chisina kujeka kwandiri ndechekuti kana iwe uchigona kuve nezvakawandisa zvekare panguva imwe chete. Semuenzaniso: kugona kuona akasiyana mafirimu pane akati wandei maSmart TV panguva imwe chete
Pindura Jimmy Velarde
Santana Jesu Mubhabhatidzi akadaro
Ini ndoda kubatsirwa nemaitiro ekuisa iyo yekuenzanisira mutengi uye kuti ungazviita sei kuti itange nehurongwa, isa Linux mint 32 mabiti ane cpu e1.25 gig yegondohwe
Pindura Santana Jesús Bautista
Lutris maneja wemutambo uyo mutambi wese anofanirwa kuve nawo